Global Voices teny Malagasy » Mampanantena Ireo Shinoa Manampahefana Ao An-toerana Fa Tsy Hamela Ny Fanatanterahana Fetiben’ny Hena Alika Ao Yulim Amin’ity Taona ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Mampanantena Ireo Shinoa Manampahefana Ao An-toerana Fa Tsy Hamela Ny Fanatanterahana Fetiben'ny Hena Alika Ao Yulim Amin'ity Taona ity
Voadika ny 17 Jona 2016 3:27 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Vonjy Voina
Pikantsary avy aminà lahatsary YouTube : Atsaharo ny Fetiben'ny Hena Alika ao Yulin.
Tao anatin'ny tsindry nataon'ny vahoaka, natsahatry ny governemanta ao Guangxi ilay Fetibe malaza ho an'ny Hena Alika ao Yulin, izay nomanina hatao amin'ity taona ity ny 21 Jona sy 22 Jona. Araka ny voalazan'ireo mpikatroka mafàna fo mpiaro biby  ao Hong Kong, nanome toky ireo manampahefana ao Guangxi fa hanao izay tsy hisian'ny famonoana faobe ny alika, amin'ny fampiharana ireo lalàna mifandraika amin'ny resaka fahadiovana sy sakafo azo antoka ho an'ny daholobe.
Efa an-taona maro ireo mpikatroka mpiaro biby manerantany no nitaky ny hampitsaharana ilay fetibe. Ny 10 Jona, 24 tamin'izy ireo no nanolotra an-tànana ho an'ny Biraon'ny governemantan'i tanànan'i Yulina ao Beijing ny fanangonantsonia iray voasonian'ireo olona 11 tapitrisa nanerana izao tontolo izao. Mitodika amin'ny Filoha Shinoa Xi Jinping, takian'ilay fanangonantsonia ny hoe :
Satria ilay fetiben'ny hena alika ao Yulin miteraka fijaliana mafy hoan'ireo biby, manohintohina ny fahasalaman'ny olombelona, manimba ny lazan'i Shina erak'izao tontlo izao, ary misy idiran'ny fitodrantena tsy mendrika miparitaka be, hatramin'ny fanitsakitsahana ireo lalàna ao Shina momba ny sakafo azo antoka, dia fotoana izao ho an'ny governemanta Shinoa mba handraisana fepetra matotra hampitsaharana tanteraka ity hetsika ity. Amin'ny fanaovana izany dia ho asehonareo mazava tsara ny maha-mpitarika anareo amin'ny fiarovana ny fahasambaran'ny vahoaka sy ny biby, ary hoporofoinareo fa tsy ho voaloton'ny karazana hetsika tahaka ireny ny lazan'i Shina manerantany ho firenena mivoatra.
Lazain'ireo mpanohitra ilay fetibe fa alika halatra ny ankamaroan'ireo alika hanina mandritra ilay fetibe. Tsy toy ireo biby fiompy hafa, tsy misy fitsirihana ny maha-azo antoka ireo hena alika ao Shina amin'izao fotoana izao, mahatonga ny fihinanana hena alika ho tena loza mitatao ho an'ny fahasalaman'ny daholobe. Ny lahatsary eto ambany, novokarin'ny tetikasa Duo Duo Animal Welfar, roa taona lasa izay, no manazava amin'ny antsipirihany ilay olana :
Ho valinteny amin'ny fitarainan'ilay mpikatroka mafana fo, ny gazety nasionalista mpanàla azy “Global Times” nanosotra  ireo media tandrefana sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby ho “mpanao an-tendrony ara-kolontsaina / mahery fihetsika”:
Nanao resaka matavy ny media tandrefana sasany sy ireo fikambanana mpiaro zon'ny biby ary nilaza fa maneho ny sarin'i Shina ny “fetiben'ny hena alika”. Lazain'izy ireo fa raha miditra an-tsehatra mampiato ilay fetibe ny governemanta dia ho tahaka izao no vokany, na ho tahaka iroa raha tsy manao izany. Fitaratry ny kolontsain'ny mpanao an-tendrony / mahery fihetsika izany.
Na izany aza, tsy avy any ivelan'i Shina ihany no niainga ny tsindry hampitsaharana ilay fetibe, na avy amin'ireo Shinoa mpikatroka mafàna fo. Vao haingana ny tarika mpandalina ny hevi-bahoaka ao amin'ny  People.com no nampanao fitsapankevitra tety anaty aterineto, ka tao anatin'ireo 30.000 namaly ny fanadihadiana dia 64% no manohana ilay fandraràna ny fihinanana hena alika. 24.4% monja tamin'ireo namaly no nanohitra ilay fandraràna.
Notsindrian'ilay tatitra fa ny fihinanana hena alika dia tsy kolontsaina nentindrazan'ny Shinoa ary nofaritany ho fihemorana ilay fetibe:
Tsy soatoavina Tandrefana ny fanehoana ny maha-olona manoloana ny biby. Efa nanana lalàna manohitra ny fampijaliana biby i Shina hatramin'ny Fanjakan'ny ankohonana Qing. Araka izany, mifanaraka tsara amin'ny kolontsaina Shinoa ny fampidirana ireo fepetra vaovao manohitra ilay fetiben'ny hena alika, izay idiran'ny famonoana sy habibiana faobe ary fihinanana alika. Tokony hohelohin'ny governemanta ny fangalarana tsy araka ny lalàna, fitaterana ary fivarotana hena alika. […] Hatramin'ny fahagola, efa nanana fomba amin'ny tsy fandrosona hena alika ho an'ny vahininy i Shina. Fivoriana fihinanana hena alika imasom-bahoka ilay fetibe ary ireo toeram-pivarotana sasany aza dia eny an'arabe mihitsy no mandrasa alika. Fikororosiana ara-kolontsaina ny fitondrantena tahaka izany.
Nanomboka tamin'ny 1990 tany ny fetiben'ny hena alika mba ho fomba hisarihana ireo mpizahatany hankalaza ny fihavian'ny lohataona. Finoan'ny olona ao Yulin ny hoe mitondra soa ho an'ny fahasalaman'ny olona iray ny fihinanana hena alika amin'ny fiantombohan'ny lohataona. Notohanan'ny governemantan'ny tanàna ilay fetibe, saingy nitsahatra tsy nanao izany intsony izy nanomboka ny 2014 satria maro dia maro ny olona no nampiakatra ny feony nanohitra azy io. Na izany aza, tsy nanakana ny fisian'ilay hetsika ny governemanta, herintaona taorian'ny nampiharana ireo lalàna mifandraika amin'ny fahazoana antoka ny sakafo sy ny fahasalamàm-bahoaka.
Michael Tien Puk Sun, solontenan'ny Kaongresim-Bahoaka avy ao Hong Kong, nilaza  tamin'ny mpanao gazety hoe nanome toky ny governemantan'i Yulin fa tsy hisy ny fandrasàna alika eny imasom-bahoaka. Tsy manakana ny olona tsy hihinana hena alika any an-tokantranony anefa izy ireo.
Nanamafy ireo mpikatroka mpiaro zon'ny biby avy any Guangxi fa hatreto dia tsy misy sorabaventy fanentanana momba ilay fetbe ao Yulin. Na izany aza, misalasala ry zareo manoloana ny ho fahamatoran'ny governemanta hampihatra ilay lalàna, na ho toy ny fomba iray fotsiny ny fanapahankevitra hampitsahatra ilay fetibe mba hanadiovan-dry zareo ny tànany raha sendra misy hetsika ara-kolontsaina “miseho tampoka” ao an-toerana. Ny sasany manahy koa hoe ny fitsirihana akaiky atao amin'ilay fetibe dia mety hifotitra  aminy ihany satria betsaka ny olona no efa mahafantatra momba an'i Yulin ary mandeha mivahiny any noho ny resaka hena alika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/17/84240/
 mpikatroka mafàna fo mpiaro biby: http://www.hkanimalpost.com/2016/06/15/%E5%82%B3%E5%BB%A3%E8%A5%BF%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BB%A4%E5%81%9C%E8%BE%A6%E7%8B%97%E8%82%89%E7%AF%80%E3%80%80%E5%85%A7%E5%9C%B0%E5%BF%97%E5%B7%A5%E6%8C%87%E6%96%B0%E6%B0%91%E8%B7%AF%E9%A3%9F%E7%8B%97/
 takian'ilay fanangonantsonia ny hoe : https://action.hsi.org/ea-action/action?ea.client.id=104&ea.campaign.id=38221&ea.tracking.id=wh_celeb
 tarika mpandalina ny hevi-bahoaka ao amin'ny: http://yuqing.people.com.cn/n1/2016/0606/c364391-28414559.html
 mety hifotitra: https://www.hongkongfp.com/2016/06/16/how-foreign-protests-against-yulins-dog-meat-festival-may-have-backfired/